Namhlanje kukho imvuselelo enkulu ehlabathini | Apg29
Namhlanje kukho imvuselelo enkulu ehlabathini
Yonke imihla, malunga 780 000 abantu nokholo kuYesu!
Zange ngaphambili embalini baye abaninzi basindiswe ehlabathini lonke kulo mhla wethu. Siphila kwixesha apho isivuno inkulu ehlabathini sathatha ngo!
tisdag 5 november 2019 14:54
Abaninzi baxakekile elindileyo wenkunkuma elikhulu ixesha lethu. Ingqalelo imvuselelo kuba inxenye yabo, azibandakanywa ngokupheleleyo. Kodwa ke, abahlobo abathandekayo: oku waba generalfel. Kukho imvuselelo enkulu kwihlabathi lethu kanye ngoku! Zange khe babe baninzi kangaka lugciniwe njenge kunjalo ngoku. Malunga nama-phezulu abantu 780 000 ukwamkela uYesu basindiswe yonke imihla emhlabeni wonke!
Ngokuqinisekileyo, oko phantsi njengenkcitha xesha lethu, ukuba uyazi, kodwa inkunkuma beniziimfama ukuqwalasela; vuyelani ke kanye okokuba abantu abaninzi kangaka kungena ebukumkanini bukaThixo yonke imihla. Ngamanye amaxesha ndicinga of the Apostles kwexesha likaYesu unomona kuthi namhlanje ziya kuba yinxalenye yale xesha ezimbalini ukuba ngoku uphile. Ixesha xa isityalo inkulu ehlabathini sathatha kwi!
imvuselelo kuyaqhubeka World namhlanje
Zange ngaphambili embalini baye abaninzi basindiswe ehlabathini lonke ukuba kuyenzeka ngexesha lethu. Yonke imihla, malunga 780 000 abantu nokholo kuYesu!
Silindele ukuba namhlanje kukho malunga 2.5 billion ngamaKristu ehlabathini.
70% kwaba baye beze nokholo bayazi ngexesha 1900, ukwenza 1,75 billion.
Kwezi, 1,75 billion, 70% yabo beze nokholo emva 1945, ngaso malunga 1.2 billion.
Kwezi, 1.2 billion abo bakholwayo emva 1945, 70% yakholwa kule minyaka mithathu idluleyo.
Oku kuthetha ukuba malunga 857 million babekholelwa kwiminyaka emithathu edlulileyo.
Oku kuthetha ukuba malunga 285 million bakholwa ngamnye kule minyaka mithathu idlulileyo kwaye imvuselelo kuyaqhubeka.
Enoba na uphando oko, uya kufumanisa ukuba ukunyuka ngamandla kakhulu kweli xesha lethu.
Umthombo: Facebook - Nils Gunnar Lönnegren
780 000 yonke imihla
Ukuba bayaqhuba izibalo eyeyalo kwinkulungwane, 285 yezigidi iya oyigcina ngonyaka ngamnye kuya kuba njalo ngayo:
23.7 million wasindisa nyanga zonke
5.5 million wasindisa veki yonke
780 000 usindiswe ngosuku ngalunye
Thina bajamelene imvuselelo enkulu ehlabathini! Zange ngaphambili embalini baye abaninzi basindiswe ehlabathini lonke njengokuba kubhaliwe zisenzeka ngexesha lethu.
Publicerades tisdag 5 november 2019 14:54:30 +0100 i kategorin och i ämnena:
V 04, torsdag 28 januari 2021 kl 11:52